Posted by Tranquillus | Sep 10, 2018 | Cilaaqaadka dadka dhexdooda
Sida laga soo xigtay cilmi-nafsiga Mareykanka iyo abuuraha fikradda Daniel Goleman, caqliga shucuurtu wuxuu muhiim u yahay sida xirfadaha aqooneed ee shaqaalaha. Buugiisa "Sirdoonka Dareenka, mugga 2", wuxuu ka warbixinayaa natiijooyinka seddex sano ee cilmi baarista caalamiga ah ee ku saabsan mowduucan wuxuuna ka goynayaa in dareenka shucuurta uu yahay mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee guusha xirfadeed. Runti maxay tahay Tani waa waxa aan isla markiiba arki doonno.
Waa maxay macnaha sir haynta?
In la eego fudud, sirdoonka dareen waa awooda aynu wax ku fahmayno dareenkeena, si ay u maareeyaan, laakiin sidoo kale si ay u fahmaan kuwa dadka kale iyo in ay tixgeliyaan. Dad badan oo dheeraad ah oo mas'uul ka ah maamulka ilaha aadanaha ahmiyad gaar ah fikrad this siin si uu u adkeeyo jawi shaqo oo ka badan wixii shaqaalaha. Waxaa ay ku bilaabataa samaynta a dhaqanka isgaarsiinta iyo iskaashiga heerarka shaqaalaha.
Fikradda caqliga shucuurta ayaa markaa ka kooban shan xirfadood oo kala duwan:
Is-aqoon: ogow naftaada, taas oo ah, baro inaad aqoonsato shucuurteenna gaarka ah, baahiyaheenna, qiyamkeenna, caadooyinkeenna iyo inaad aqoonsatid shakhsiyaddayada dhabta ah, taas oo ah in la yiraahdo cidda aan nahay.
Is-xakamayn: waa awooddeena in aan xakameyno shucuurteenna si ay annaga nooga faa'iideystaan ​​oo aaney ahayn ilo aan dhammaad lahayn oo welwel leh annaga iyo asxaabteena
Dhiirrigelinta: waa awoodda qof walba u leeyahay in uu dejiyo himilooyin la qiyaasi karo oo uu xoogga saaro iyaga in kasta oo caqabado jiraan.
Naxariis: kani waa awooddeena inaan isku dhigno dadka kale, taas oo ah, inaan fahamno shucuurtooda, dareenkooda iyo baahidooda.
Xirfadaha bulshada: waa awooddeena inaan la xiriirno dadka kale, haddii aan qancinno, hoggaaminno, si loo sameeyo is afgarad ...
Muhiimadda sirta shucuurta ee adduunka xirfadeed
Maanta, qayb weyn oo ka mid ah shirkadaha casriga ah ayaa meel mariyay "meel bannaan", oo ah goob shaqo oo furan oo u saamaxaysa shaqaalaha iyo maamulayaasha in ay u shaqeeyaan sidii koox iyo kor u qaadka waxqabadka shirkadda. shirkadda. Sababtan awgeed, waxaa lagama maarmaan u ah wada shaqeeyaha in uu helo sir Tani waa lagama maarmaan si uu si wanaagsan u aqoonsado dareenka, dareenka iyo baahiyaha asxaabtiisa ama asxaabtiisa si loo kobciyo jawi shaqo oo tayo leh.
By hubinta isdhexgalka shaqaalaha dhexdooda, sirdoonka shucuurta ayaa sidoo kale hubiya horumarinta koox aad u fara badan. Waxay leedahay saamaynta hagaajinta wax soo saarka iyada oo loo marayo tababbarka layliyo kala duwan ee kicinta sirta shucuurta. Intaa waxaa dheer, is-qabqabsiga, kaas oo ah mid ka mid ah xirfadaha sir-doonka shucuurta, wuxuu kor u qaadayaa is-gaarsiinta xidhiidhka dadka ee shirkadda wuxuuna fududeeyaa isuduwidda kooxaha aan tartameyn laakiin wadajir u wada shaqeyn.
Lix lixaad oo dareen ah oo lagu aqoonsado
Aqoonsiga iyaga ayaa fududeynaya inaanu u adeegsanno faa'iidadeena. Sida caadiga ah, barashada si habboon u waafaqsan habdhaqanka ay abuurtay dareenkaaga ayaa hagaajin doona sirtaada maskaxda.
Dareenkan waxaa lagu gartaa korodh kedis ah tamar iyo dareen fiican. Waa natiijada qarsoon ee hoormoonka farxada sida oxytocin ama endorphin. Waxay horumariyaan rajada.
Waa la yaabay
Waa dareenka muujinaya naxdinta leh ama sababtoo ah arrin lama filaan ah ama xaalad. Natiijadu waa horumarinta unugyada dareenka, oo masuul ka ah aragga iyo maqalka. Tani waa natiijada qulqulka sare ee qanjidhada.
Waa jibbaar dhamaystiran ama aan ka fekereynin wax ama xaalad aan ku tixgelineyno nasiibkeena. Caadiyan, tani waxay keentaa dareen ah lallabbo.
Waa xaalad dareen ah oo la timaado xilli xasilooni ah si ay lacag ugu ururiso dhacdo xanuun leh. Waxaa soo bandhigaya hoos u dhac ku yimaada luuqadaha gesturalaha ah ama qaabka dhaqdhaqaaqa.
Waxay ka tarjumaysaa wax aan fiicnayn marka wax muhiim u ah nala siidaayo nala soo jiidasho ama wax nala soo rogo annaga ama wax aanan ogolayn. Tani waxay keenaysaa kor u kaca tamarta.
Waa wacyi-gelinta khatarta ama hanjabaadda iyadoo loo eegayo xaalad iyo awoodo si ay u fekeraan hababka kala duwan ee loo wajahi karo ama looga baxsan karo. Tani waxay keenaysaa kororka adrenaline iyo dhiigga ku soo qulqulo muruqyada haddii ay dhacdo in si dhakhso ah loo geliyo jirdhiska jirka.
Sirdoonka dareenka ee hoggaaminta
Waxaa la ogaaday in dadka leh sir-doon maskaxeed oo xoog leh ay leeyihiin hoggaan ka wanaagsan iyo kuwa kale. Taas darteed, heerka hoggaanku kuma tiirsanaan karo mawqifka uu maamuluhu ku dhex jiro shirkadda, laakiin wuxuu awood u leeyahay inuu la shaqeeyo shaqaalaha oo la xiriiro dadka kale. Kaliya adoo fulinaya shuruudahan waxay hogaamiye u noqon karaan hogaamiye wax ku ool ah.
Maamulaha waxaa sidoo kale lagu xukumaa sida uu u dhaqmayo iyo ficilladiisa, taas oo ah in la yiraahdo, isgaadhsiinta aan caadiga ahayn. Iyadoo la raacayo mabda'a 'siinaya iyo siinayo', shaqaalaha ayaa si fudud uga jawaabi doona codsigooda iyadoo la tixgelinayo ixtiraam iyo fiiro gaar ah baahidooda. Waa awoodda waxqabadka iyo suurtogalnimada bulsho ee kaalin muhiim ah ka ciyaara halkan.
Meeqo meel aad siiso sirta shucuureed ee qorista?
Daniel Goleman wuxuu nooga digayaa ku takrifalka caqliga shucuurta sida ay ahayd dhanka sirdoonka. Xaqiiqdii, qaybta sirdoonku waxay ahayd aalad lagu go'aamiyo awoodda aqooneed iyo kartida mid kasta si loogu guuleysto nolosha xirfadeed. Si kastaba ha noqotee, natiijooyinka imtixaannada kala duwan waxay kaliya go'aaminayaan 10 illaa 20% ee guusha xirfadeed. Sidaas darteed macno malahan in wareysiga lagu saleeyo natiijooyinka aan dhammeystirnayn.
Dhinaca kale, sir-doonka shucuurta ayaa kicin kara jimicsiyo iyo dhaqamo kala duwan. Waxaa intaa dheer, waa suurtagal in la meel dhigo dhibcood tan iyo shanta qaybood ee sirta shucuurta ku salaysan aan la qiyaasi karin ama qiyaasi karo. Waxaa suurtagal ah inaan kaliya koontarooleyno qeyb ka mid ah qaybahan oo aan leenahay naafanimo kale.
Marka la soo gaabiyo, ka warhaynta sirta dareenka ee maamulayaasha iyo shaqaalaha shirkadku waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta wax soo saarkooda iyo awooddooda ay ku waafaqsan yihiin isbedelka joogtada ah ee deegaankooda. Tani waxay ka dhigan tahay helitaanka tayada nolosha iyo horumarinta xirfadeed, heerka uu qofku ka duwanaan karo qof kale.
Sirdoonka shucuurta ee shaqada Sebtembar 12th, 2018Tranquillus
horeHagaajinta Isgaarsiinta Xirfadahaaga Shaqada
socdaSidee loo dhegeystaa si waxtar leh?